अदुवाले बजार नपाएपछि किसान चिन्तित | दर्पण दैनिक
अदुवाले बजार नपाएपछि किसान चिन्तित
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र २४ गते ०७:३२
राधा फुलारा, डडेल्धुरा । कोरोना भाइरसका कारण देश ‘लक डाउन’ हुँदा डोटिका किसान चिन्तित बनेका छन्। जिल्लाको जोरायल गाँउपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको अदुवाले बजार नपाउँदा चिन्तित बनेका हुन ।
उत्पादन गरेको अदुवाले बजार नपाएपछि बारीमै कुहीने थालेको छ। अदुवा बारीमा कुहिन थालेपछि त्यहाँका किसानहरु मर्कामा परेका छन्। जोरायल गाँउपालिकाले गत बर्ष वडा नम्बर ४लाई अदुवा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
अदुवा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि किसानले अदुवा खेतिलाई नै नगदेवालिका रुपमा लिई उत्पादन गर्दै आएका छन। कुनै समय गहुँ, जाँले भरिभराउँ हुने खेतमा अहीले अदुवाले भरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा गाँउपालिका–४ भित्रका करिव ५० घर परिवारले अदुवा खेति गदै आएका छन्। अदुवा खेतमै कुहिन थालेपछि किसानहरुलाई के खाने के लगाउने? भन्ने पिर परेको छ ।
उत्पादन भएको अदुवा विक्रि गरेर यस क्षेत्रका कृषकहरुले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु खरिददेखि लिएर छोराछोरी पढाई खर्च समेत यसैबाट गर्ने गरेका थिए। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण अदुवा ढुवानी गर्न असहज भएको कृषक बताउँछन ।
गाउँपालिकाले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि अन्य बाली छोडेर अहीले १५ रोपनी जग्गामा अदुवा खेती गरेको कृषक लाल देउवाले बताए ।
लगाएको अदुवा बारीमै कुहिन थालेपछि साँझ विहानको छाँक कसरी टार्ने भन्ने समस्याले सताएको बताए। ‘अहीले अदुवा बिक्रि गर्ने समय भएको छ। यही समयमा ‘लक डाउन’ भयो। उनले भने, ‘वर्ष भरि गरेको मेहेनत खेर गयो। अब के गर्ने? हामी किसानहरु समस्यामा पर्यौ।’
गाउँपालिकाले नै चार हजार तिन सयको विउँ दिएको र त्यही विउबाट अदुवा खेती गरेको अर्को कृषक ईन्द्रादेवी बोहाराले बताइन्। बारीमा लगाएको अदुवाले बजार नपाउँदा आफूहरु मर्कामा परेको उनले बताइन्।
विस्वभर फैलिरहेको कोरोना भाईरसको कारण बारीमा लगाएको अदुवाले बजार नपाउँदा किसानहरुको अदुवा बारीमै कुहिन लागेकोले किसान लाल देउबाले गुनासो गरे . अदुवाका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको जोरायल गाँउपालिका ५ नकुमा किसानहरुले अदुवा खेति मात्रै गरेका थिए ।
२०७७ जेष्ठ २३ गते ०२:०७
दिपेन्द्र जयसवाल,बारा। विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) प्रकोपका बिच कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी आन्मनिर्भरता बढाउँदै लैजानुपर्ने बहस चलिरहेका बेला बाराको किसान भने खेतीमा गरिएको लगानी समेत जोगिँदैन भन्ने चिन्तामा छन् ।
२०७७ जेष्ठ २३ गते १०:५०
एजेन्सी । सलह करोडौंको समूहमा उड्ने फट्याङ्ग्रा प्रजातिको किरा हो। यसको पछाडिको खुट्टा मोटो हुन्छ। मरुभूमि क्षेत्रमा पाइने किरा भएकाले उच्च तापक्रम अर्थात् ४० देखि ४५ डिग्री सेल्सियससम्म यो बाँच्छ र बढी सक्रिय हुन्छ । २० डिग्रीभन्दा कम तापक्रम भयो भने यो सक्रिय हुँदैन ।